बोर्ड सदस्य ऋषिराम दाहाल भन्छन्- क्यान आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री भाे (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं, ८ पुस । पछिल्लो एक साता नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले चार खेलाडीमाथि गरेको कारबाही विवादमा परेकाे छ । क्यान, खेलाडी र समर्थक मात्रै हैन, गठबन्धनको सरकारले समेत यो घटनालाई निकै चासोका साथ हेरेको छ । क्यानको २९ मंसिरमा बसेको बोर्ड बैठकले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, कमलसिंह ऐरी र सोमपाल कामीलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै केन्द्रीय सम्झौताबाट ६ महिना बाहिर राख्ने र कप्तान मल्ल र उपकप्तान ऐरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । यसपछि चारै खेलाडीले क्यानलाई कारबाही पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तै उनीहरुलाई सहयोग गर्दै अन्य खेलाडीले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले स्वेच्छाचारी ढंगले क्यान चलाएको, आर्थिक अनियमितता गरेको, प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै विराेध सुरु भएकाे छ । यिनै विषयमा क्यानका सदस्य ऋषिराम दाहालसँग न्युज कारखानाकर्मी रमेश सुवेदीले गरेको अन्तर्वार्ता :
– तपाईसहित ६ बोर्ड सदस्यले खेलाडीको कारबाही फिर्ता होस् भन्ने माग राख्नु भएको छ । आवश्यक थियो ?
तीन महिनापछि हामी ठूलो प्रतियोगिता खेल्दैछौं । यसअघि हामीले जुन लेभल-१ प्राप्त गरेका छौं, त्यसलाई जोगाउनुको ठूलो चुनौतीको विषय हो । यस्तो अवस्थामा खेलाडीलाई खेल खेलाउन प्रोत्साहन, प्रेरित गर्ने समयमा खेलाडीमाथि कारबाही गर्दा हाम्रो लेभल जोगिन्छ कि जोगिँदैन ? र, खेलाडीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने अधम्य अपराध गरेका हुन् ? त्यो विषय आउनुपर्‍याे । उनीहरूले चित्त नबुझेका कुरा राख्दैमा खेलाडीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं ।
उनीहरूले यस्तो हुनुपर्छ । यो काम गर्‍याे । यस्तो गर्‍याे भनेर आवाज उठाएका छैनन् । क्यानविरुद्ध नाराबाजी गरेका छैनन् । उनीहरूले आफ्ना माग राखेका छन् । ग्रेडिङमा समस्या छ सच्चाउनु पर्‍याे भनेका छन्। यति भन्दैमा एकैचोटि खेलाडीलाई कारबाही गर्ने ? कप्तान उपकप्तानलाई निकाल्ने ? चार खेलाडीलाई ग्रेडिङमा नराखी भोको पेट खेल खेल भन्ने । जो राष्ट्रका लागि खेलिरहेका छन्, उनीहरूको मनोबल बढाएर लेभल-१ जोगाउनुपर्ने बेलामा खेलाडीलाई पिटेर तर्साएर लेभर वान जोगिन्छ त ?
– क्यानले खेलाडीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकै हुन् भनेको छ । तपाईहरूकाे कुरा फरक देखियाे नि ?
हामी खेलाडीसँग टचमा छैनौं । खेलाडीले अनुशासन भंंग गरे कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने पक्षमा पनि छैनौं । अनुशासनको कारबाही सबैको पक्षमा छ ।बोर्डले आफूले गरेका कमीकमजोरीलाई सच्चाउनुको साटो खेलाडीमाथि प्रहार गर्नु भयो । कसैलाई कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्छ । खेलाडीले खेल्ने हो, राजनीति गर्ने हैन । लेभल वान जोगाउनु छ । यो ठाउँमा पुग्नु हाम्रो गन्तव्य हो । खेलाडीले यी यी कुरा चाहिन्छ भनेर माग गर्दा माग राख्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।
खेलाडी र क्यानका पदाधिकारीकाे संयुक्त बैठक राखेर खेलाडीलाई सम्झाउने, खेलाडीको यी यी कुरा पूरा गर्न सक्छौं । हाम्रो हैसियत यति छ । यी यी माग पूरा गर्न सक्दैनौं । ग्रेडिङ पनि यो अवस्थामा यसरी गर्छाैं भन्नुपर्छ ।
अहिले हामी डिसेम्बरको अन्तिमतिर छौं । जनवरीबाट २०२२ को ग्रेडिङ हुनुपर्छ । नयाँ ग्रेडिङ हुनुपर्छ । अब, उनीहरुको ग्रेडिङको समय सकिसक्यो । बरु २२ को एक दुई महिनाअघि नै ग्रेडिङ गरेर सकौं । कप्तानसँग सल्लाह गरौं । कप्तानलाई पनि आफ्नो टिममा को कस्तो छ ? को घाइते छ ? कसलाई के समस्या छ ? धेरै थाहा हुन्छ । हामीले कप्तानसँग सल्लाह भयो भनेर सोध्यौं । किन गर्ने भन्नु भयो । यी कुरा भएकाले हामीले खेलाडीको पक्षमा खुला दिमागमा सोचेर हामीले कुरा गरेका हौं ।
खेलाडीसँग अनुशासन भंग गर, क्यानकाविरुद्ध हिँड भन्ने कुरा हामीले मान्दैनौं । खेलाडी क्यानको अनुशासनमा बस्नुपर्छ । क्यानको विरुद्धमा जान पाइँदैन । गए कारबाही हुनुपर्छ तर कारबाही गर्नुको पनि सीमा हुन्छ । विधि र पद्धति हुन्छ । त्यो कुरा नियमसंगत छैन । यो चाहिँ जबर्जस्ती आफै बोक्सी आफै झाँक्री भएझै आफैले प्रतिवेदन बनाएर कारबाही गरिएकाे छ । अनुशासन कमिटी छँदैछ । त्यो अनुशासन समितिले गर्नुपर्ने कारबाही उसले नगरी, बोर्डमा छलफल नै नगरी कमिटी बनेको छ । जाे कमिटीको संयोजक छ, उनै संघका कार्यबाहक सचिव छ । उहाँले नै कारबाही गर्नुपर्छ भने कसरी छलफल हुन्छ ? त्यसमा हाम्रो असहमति रह्यो । नोट अफ डिसेन्ट राख्यौं । क्यानले पनि जितोस्, खेलाडीले पनि जितोस् । सबैको कमीकमजोरी निकालौं र अगाडि बढौं भन्दा उहाँ (अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द) मान्नु भएन । जबर्जस्ती बहुमत छ भन्दै कारबाही गर्नुभयो ।
– खेलाडीले गुट बनाएर आफूअन्तर्गतकालाई समेटेर हस्ताक्षर गरेर क्यानलाई ११ बुँदे माग राखे भन्ने कुरा छ ?
१४ खेलाडीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका हुन् । हामीलाई सहयाेग गर्नुभयाे भने राम्रोसँग खेल्न सक्छौं । नेपालको नाम राख्न सक्छौं । हामी लेवल वान जोगाउन सक्छौं भन्नु कसरी दबाब भयाे ? यदि यो भएको वा गरेको हो भने, जबर्जस्ती हस्ताक्षर गरेका हाैं भन्ने खेलाडी आउनुपर्‍याे । क्यानका पदाधिकारीले धम्काएर खेलाडीलाई जबर्जस्ती खेलाडीकै विरुद्धमा बोल्न लगाएको सुन्नमा आएकाे छ। खेलाडीकै विरुद्ध क्याम्पेन गर्न लगाएको, दुनियाँ ठाउँबाट दबाब दिएको भन्ने सुन्नमा आाएकाे छ ।
– तपाईहरू पनि सुदृढीकरणको बहानामा क्यानलाई पेलेरै जान लागेको भन्ने आरोप छ नि ?
क्यानलाई पेलौ भन्ने कुरै हैन । हामी पनि क्यानको एक पाटो हो । हामी पनि बोर्ड मेम्बर हो । गलत कुराहरू हुँदा हाम्रो मत सानो भयो होला । तर गलत कुराहरूलाई गलत हो भन्ने, भन्न पाउनुपर्छ नि । त्यसका लागि हामीले कुरा उठाएको हो ।
– अब क्यानको साधारणसभा आउँदैछ । के गर्नु हुन्छ ?
हामीले कुरा उठाएका छौं । यो कुरा कहाँ जान्छ । यदि जिल्लाको अधिवेशन नगरी साधारणसभा गराउनु पर्छ भनेर क्यानको बहुमतले भन्छ भने हामी यही कुरा लिएर साधारणसभामा लगेर हाम्रो कुरा प्रस्तुत गर्छौं । सहभागी नहुने, बहिस्कार गर्ने, राजीनामा दिने भन्ने कुरा हाम्रो हैन । हामी त्यहीँ बस्छौं । क्यानलाई लाइनमा, पद्धतिमा ल्याउन उहाँहरूसँग बसेर अगाडि बढ्छौं ।
मनकारी डाक्टर: गरिबका लागि निःशुल्क ओपीडी सेवा